HD Video Converter Pro maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Avy amin'ny mac aho
Toa tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, ireo mpandrindra fampiharana rehetra izay mamela antsika hanova horonantsary amin'ny endrika hafa dia nanaiky hanome ny fangatahan'izy ireo maimaimpoana ao amin'ny Mac App Store. Androany kosa ny anjaran'ny HD Video Converter Pro, fampiharana mamela antsika hanova endrika endrika video amin'ny endrika hafa, anisan'izany ny rakitra 3D. Ity rindrambaiko ity dia manana vidiny 24,99 euro mahazatra ao amin'ny Mac App Store, fa mandritra ny ora vitsivitsy dia ho azo sintomina maimaim-poana izy io, koa aza ela hanararaotana an'ity tolotra ity.
HD Video Converter Pro dia mamela antsika, toy ny ankamaroan'ny fampiharana an'io karazana io, hanova izay endrika horonan-tsary sy horonam-peo mba hahafahana milalao amin'ny sehatra hafa izay tsy mifanaraka ny rakitra hiova fo. SYNy fiasan'ny HD Video Converter Pro dia tena tsotra. Raha vantany vao mihazakazaka ny fampiharana isika dia tsy maintsy misafidy ny rakitra loharano avy amin'ny lahatahiry misy azy. Manaraka izany dia tsy maintsy misafidy ny endrika fivoahan'ny fisie isika, misafidy ny lampihazo tiantsika hijerena na hihainoana azy, raha endrika audio io.
Ny endrika tokana izay tsy ampiasan'ity antso ity dia MTS. Mba hamadihana ity endrika horonantsary ity amin'ny hafa, manome izany maimaim-poana ho antsika ihany koa ilay mpandrindra ny fampiharana MTS M2TS Converter Pro, izay ahafahantsika mamadika an'io karazana endrika video io amin'ny endrika hafa. Ataovy ao an-tsaina fa ny ankamaroan'ny mpanova horonantsary dia tsy manohana ity endrika ity, izay mbola ampiasaina ankehitriny na eo aza ny tsy fitoviana atolotray amin'ireo mpanova horonantsary lehibe. Toa ny HD Video Converter Pro, azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » HD Video Converter Pro maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
leticiadd dia hoy izy:
15 dolara. maimaim-poana.
Mamaly an'i leticiadd
Alvaro Quezada sary placeholder dia hoy izy:
Eny tsy maimaim-poana izany
Valiny tamin'i Alvaro Quezada
Manakaiky kokoa ny Apple Maps miaraka amin'ny API ho an'ny daholobe MapKit
'Tomb Raider' sy 'Tomb Raider: Underworld', nihena ny vidiny nandritra ny fotoana voafetra